WAXAAN SI FIICAN U DHALI KARNAA CHERRY MACAAN. - BEERTO CHERRY
Ugu Weyn Ee Beerto Cherry
Cherry Sweet! Yaa dareemeynin dhadhanka dibnaha? Caan maahan, macaan-macaan, flirting, ama jilicsanaan-jilicsan. Dhir geedkan, iyo dhadhanka jeeriga marnaba waxay noqon doonaan wax ka mid ah ee la soo dhaafay.
Si cherry macaan si aad noo farxaan leh dhalidda fiican iyo horumariyaan si fiican, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso saddex dhibcood yar: dooro meesha saxda ah, hubi inaad iibsato geedo ee xannaanooyinka ama suuqyada gaarka ah, beerto jeeriga macaan waa ugu wanaagsanaa guga hore.
Diyaarinta beeritaanka jeeriga
Maxay yihiin shuruudaha loogu talagalay ciidda
Ciidhalkaas oo beerto la qorsheeyey, waa inuu ahaadaa mid bacrin ah, waa sahlan tahay in la soo gudbiyo hawada, taas oo, waa sheyli, iyo sidoo kale in loo ogolaado qoyaan iyo noqdaan qoyaan. Xayawaanka, doorbididda mugdiga ama loamy fudud.
Jiirta laguma talinayo in ay ku beeri on dhoobo culus ama peats, iyo, dabcan, on sandstones qoto dheer. Waxay waxay u dulqaadataa biyaha joogta ah xitaa waqti gaaban oo aad u dalbanaya qoyaan. Sababahan dartood, cherry macaan laguma beeri karo meelahaas meesha biyaha dhulka hoostiisa ku yaal.
In beerta, for iskutallaabta-pollination ee jeeriga macaan, waxaa lagu talinayaa in ay ku beeri ugu yaraan 2-3 noocyada. Gorma waxaa loo tixgeliyaa deris wacan, sababtoo ah waxay la siman yihiin johnta.
Hadda diyaarinta dhulka beeritaanka
Cherry Sweet waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay geed aad u qoyan, gaar ahaan waxay ka welwelsan tahay xaaladda carrada, waa in shaki la'aan bacrin ah. Sidaa darteed, ka hor beerashada beer cusub, dhulka iyo tayada ayaa la hagaajiyey. In dalka halkaas oo ubaxyo dhalinyaro ah koraan, marka lagu daro digsi, Bacriminta waxaa lagu soo bandhigay, labadaba organic iyo macdanta:
Humus, compost ama digada lagu beeray (10-15 kg halkii m2).
Bacriminta macdanta - Fosfooraska (15-20 g. Per m2) iyo potassium (20-25 g halkii m2).
Qadarka lime wuxuu ku xiran yahay qaabdhismeedka farsamada ee ciidda iyo heerka aysidhka. Tusaale ahaan, koonfalka iftiinka wuxuu sameynayaa ilaa 500 garaam. halkii m2, iyo carrada culus, oo leh aalado carrada ka hooseeya 4.5, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro qiyaasta qiyaastii, qiyaastii 900 g oo lime m2.
Laakiin haddii haddii beerta mustaqbalka ee mustaqbalka, ka dibna xaddiga of Bacriminta compost iyo potash khafiif ah ayaa la jaray, halka Bacriminta fosfooraska kor u kaca ilaa 25 garaam. m2.
Sannad ka hor beerashada geedka jardiiniyada, carrada aan la beeran, taas oo ah, waa xaalad of a steam madow. Laakiin inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee cagaarka waa lagama maarmaan. Sannadka soo socda, ballaadhka wareegga garabka ayaa la kordhiyaa illaa 1 mitir, sannad kadibna wuxuu kordhiyaa nuska mitir kale. Qeybtan waxaa lagu hayaa qaabka ugu fiican, iyada oo aan haramaha, iyo daboolin wax alaab ah.
Ha ilaawin bacriminta
Sidaas oo kale Cherry macaan wuxuu bilaabmaa inuu hore u bloom iyo inay midho u dhasho, waa mid muhiim u ah helitaanka kaydka nafaqada ee adduunka. Waxa lagu soo cusbooneysiiyaa xilliga dayrta, waxay si siman u isticmaalaan Bacriminta organic iyo macdanta, tirada ayaa la aasaasay ka dib qaadashada carrada iyo falanqaynta falanqaynta.
Beerta khibrad leh waxay ku adkaysataa bacriminta 20 cm qoto dheer. Daryeelka waa in la qaataa marka la isticmaalo bacrimin qalalan, waxay ku siin karaan natiijooyin taban. Meelaha laga helo cimilada, Bacriminta macdanta ayaa marka hore lagu kala diraa biyaha, oo kaliya markaas ka qaybqaado halka ay jirto raasamaalka ugu weyn ee xididdada hindhisada.
Xalka oo leh bacriminta macdanta aan la keenin jirridda geed, waa wakhti qashin ah, tan iyo xididdada ku yaala halkaas kuma jiraan wax walba oo waxtar leh.
Si aad u soo jiitaan shinni iyo hagaajinta tayada ubax iyo pollination, subaxdii waxaad ku buufin karaa geedo cherry leh xal copper sulfate. Inta lagu jiro muddada ubax, jeeriga ayaa laga yaabaa inay dhaxan yar yar, sidaas darteed, waxay ku talinayaan in lagu buufiyo taajka leh xal gaar ah si loogu kiciyo abuurka ugxan, ama biyo caadi ah, taas oo si weyn u kordhisa caabiga ubaxa.
Maxay tahay xajmiga ceelka
Soo saarista waxay bilaabaan inay qodaan god hore, 3-4 bilood ka hor intaan la qorsheyn. Baaxadda godadka waa inay ahaataa qiyaastii 80 cm, iyo qoto dheer oo ku saabsan 60 cm.
Qeybta hoose ee ceelku waa la furfuray, laba baaldiyo oo ah humus dayrta, isku qasan lakabka sare ee carrada, iyo ka tagay muddo wakhti ah. Marka beeritaanka guga 400 garaam oo superphosphate ayaa lagu darayaa godadka beerta., 100 garaam oo sulfate sodium ah, ama 1 kg oo ash, oo dhanna si tartiib ah ayaa loo qasi karayaa.
Bacriminta waxaa lagu sameeyey dhexdhexaad, jeeriga uma baahnid tiro badan oo iyaga ka mid ah. Ka dib oo dhan, xad-dhaaf ayaa u horseedi kara abuuritaanka guulo xooggan, kuwaas oo inta badan aysan waqti u lahayn inay si buuxda u kobcaan dhammaadka xilliga sii kordhaya.
Diyaarinta seedling beerashada
Waxay iibsadaan oo dhirta, xaaladaha badankood, sabiibta sannadlaha ah, dhif ah dhirta laba sano jirka ah.
Nidaamka asaasiga ah ee geedo cherry macaan waa in si taxadar leh loo baaro, ilmo adag oo hadda jira iyo waxyeelo ay xididada waxaa la jaray mindi fiiqan. Waa mid aan loo baahnayn in la oggolaado qalajinta xididdada inta lagu jiro gaadiidka, taas oo si xun u saameeysa sida ugu dhakhsaha badan geedaha ay u bilaabi doonaan. Laakiin haddii nidaamka xididka weli wax yar la qalajiyey, waxaa lagu qooyay biyo 6-7 saacadood.
Mararka qaarkood, si loo abuuro xiriir fiican oo xididdada leh ciidda, si ay cherry helo acclimatized dhakhso, Nidaamka xididka lagu rusheeyey isku dhafka dhoobada ama chernozem iyo mullein.
Gormeega ee geedi socodka ah ee beerto ku rid on buuraha iyo xididdada nus-budada ah, dhulka waa in si joogto ah loo ruxay, si ay u buuxiso meel bannaan oo dhan u dhexeeya xididada. Baaldi biyo ah ayaa lagu shubay, lafilkuna wuxuu ku shubmaa dhulka hadhay ee dusha sare. Waxaa lagama maarmaan ah in la tumo dhulka, ka dibna dalool dalool agagaarka ku shub hal baaldi dheeri ah oo biyo ah. Geedka loo beeray dhooboiyo ciidda ku wareegsan godka waa in la googooyaa peat ama humus.
Waxaa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan noocyada dambe ee jeeriga macaan.
Beeritaanka geedo cherry
Goorma ayaan dhali karaa?
Inta ugu fiican cherry macaan si ay u beeri guga hore, ka hor bilowgii habka bararka kelyaha. Beeray horay loo soo qoday, xitaa dayrta, iyo ku dar bacriminta macdanta iyo organic.
Haddii, si kastaba ha ahaatee, cherry macaan waxaa la beeray markii ubbooyinku ay bilaabeen inay ubaxu, ka dibna geedka la beeray wuxuu leeyahay fursad si ay u koraan liidata, iyo geedaha sida ay saameeyeen cudurada inta badan kuwa kuwa la beeray waqti ku.
Geedka berri xilliga dayrta lama soo-jeedin, maadaama ay jirto khatar ah in lagu keydiyo guulaha sannadlaha ah, sababtoo ah inta badan waxay gaareen 1 mitir ama wax ka badan geedaha hal sano iyo labo jirka ah.
Ku saabsan qoto dheer ee dhulka
Kirilku ma jecla beeritaanka qoto dheer: qoorta xididka ah (ama xariiqda u dhexeysa xididada iyo jirridda) waa inay ahaadaan heer dhulka ka dib waraabiyo. Inta lagu jiro beerashada, dhirta waxaa kor loo qaadaa 5 cm, sidaas darteed dhulka ayaa u nugul inay degaan.
Si adag Beeraha si qotodheer ah ayaa u xun horumarka asaasiga ah, laakiin, iyo beerto yar oo ubax ah waxay saameyn taban ku yeelanaysaa nidaamka asaasiga ah, xilliga xagaaga waxa uu ku badan yahay, iyo xilliga qaboobaha waxa uu qaboojiyaa. Marka beerto beerto, xididdada inta lagu jiro beerashada waa waxyeello gaarsiisan, iyo geedo aan degganeyn oo ujirta inay degaan.
Bacriminta cherry ka dib markii laga beerto
Waa muhiim inaad u hogaansanto qiyaasta. Qadar sarreeya bacriminta nitrogen wuxuu keeni karaa laamyo si loo xoqdo, nabarrada jirka iyo laamaha, iyo waxyeelo soo noqnoqota oo soo noqnoqota.
Si aad u ogaato haddii a cherry macaan u baahan bacriminta nitrogenous, waxaa la qiimeeyaa sida ugu dhakhsaha badan caleemaha sii kordhaya ka hor bilaabashada fruiting. Tusaale ahaan, dhamaadka laanta ugu muhiimsan, saddex caleemo oo cusub iyo in ka badan ayaa la sameeyey; Bacriminta aan la adeegsan. Laakiin, haddii ay isku wada mid yihiin, lambarkooda iyo dhererkoodu way ka yar yihiin, ka dibna bacriminta waxaa lagu dabaqaa nitrogen. Potash iyo Bacriminta Fosfatiga waxaa lagu dabakhi sanadka soo socda ka dib marka la beerto.
Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, Bacriminta organic waxaa lagu dabaqay tiro xadidan, sababtoo ah isticmaalkooda ayaa waxtar u leh bacriminta macdanta si loo hagaajiyo isu dheelitirka biyaha. Bacriminta dabiiciga ah ee bacriminta ah waa mamnuuc in la sameeyo cherry.
Daryeelka geedka kadib beerashada
Waraabinta waa arrin aad muhiim u ah waqtigan.
Cherry si adag u adkaynaya abaarta, la'aanta qoyaan ayaa si xun u saameysa iyada. Waxay u baahan tahay waraabin dheeri ah, gaar ahaan bilawga jiilaalka. Cabbitaanka qabowga-qaboobaha waxaa loo tixgeliyaa tayada ka sareysa guga. Waraabiyo ka hor imaanshada jiilaalka gebi ahaanba saturates ciidda leh qoyaan.
Waraabinta jeeriga waa loo kala qaybin karaa saddex xilli. Biyaha guga ka hor inta aan la gooyinTani waa waraabinta ugu horeysa. Marka labaad ee 15-20 maalmood, marka geedaha istaagaan ubaxu. Oo markii ugu dambeysay waxay ku shubaan cherry macaan 20 maalmood ka hor bilowga xilliga Bisaylkiisa.
In yar oo ku saabsan quudinta geedka
Ku quudi geedaha yar yar 2-3 jeer xilli ciyaareed. Bacrinta ugu fiican ee loo isticmaalo dharka sare waxaa loo tixgeliyaa in lagu darey lakabyo, 1 tbsp oo biyo ah ayaa lagu daraa 1 baaldi biyo ah. qaado qaado bacriminta adag.
Waxay ku quudiyaan cherry macaan laba jeer, May iyo June, iyo dhirta ka weyn saddex sano - 3-4 jeer. Marka midhaha oo dhan laga gooyay geedka, Bacriminta nitrogen waa ka fiican tahay in la isticmaalo. Guga gu'ga ka dhigo HOL.
Qalab aad u fiican oo ku saabsan quudinta geedaha waa ash.
Dhibaatada ugu weyn ee cherry macaan, marka koray, waa burburinta miraha. In dildilaaca kuwaas oo soo baxday inta lagu jiro muddada abaarta iyo roobab culus, caashaqay, iyo kallana miro. Nidaamka ugu fiican ee halganka waa dhismaha cirifka beertalaakiin waa qaali.
Gorma waa in laga ilaaliyaa shimbiraha, ugu khatarsan cadowga, sababtoo ah waxay cunaan dhammaan miro la daaqay. Shimbiraha way ka baqayaan qaababka jirka iyo farsamada.
Iyo si aad u ilaaliso geedka ka jajabiyo jirridda, xilliga dayrta iyo gu'ga waxay soo saaraan cad cad oo lime ah.
Waa maxay isticmaalka iyo sida ugu dhakhsaha badan u sameeyaan qajaarka cusbaynaya
Hababka iyo qalabka loogu talagalay in la helo boogo beero
Dufanka xooggan oo isku dhafan, digaagga oo si degdeg ah u koraya
Sariiraha diiran ee aqalka dhirta lagu koriyo leh gacmahooda: qalabka, sameynta, talooyin waxtar leh
Canab "Liana" - noocyo kala duwan oo ka horjeeda abaarta
Marka ay timaado cereals, su'aasha ayaa soo baxaysa sida looga ilaaliyo cayayaanka kala duwan. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa habka kiimikada ee loo xakameeyo cayayaanka khudradda - "xoqitaanka" xajmiga ". Qaab-dhismeedka iyo foomka sii-deynta Maaddada firfircoon ee geed-liddiga fiiqda waa Pinoxaden-cloquintoset mexyl. Read More
Sida loo sameeyo qulqulka digaagga iyaga oo gacmahooda leh: noocyada iyo tiknoolajiyada
Sidee u koraan turkiga turkiga Big 6
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beerto Cherry 2019